Tababare Diego Simeone oo markii 7-aad oo xiriir ah kooxda Atletico u soo saaray Koobka Horyaallada Yurub – Gool FM
Tababare Diego Simeone oo markii 7-aad oo xiriir ah kooxda Atletico u soo saaray Koobka Horyaallada Yurub
(Madrid) 22 Abriil 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee ka dhisan waddanka Spain, Diego Simeone ayaa ku sii xidideysanaya naadigaasi, waxaana haatan markoodii 7-aad oo xiriir ah uu u horseeday ka qayb galka Koobka Horyaallada Yurub ee xilli ciyaareedka dambe ee bilaabanaya.
Simeone oo ku soo biiray Atletico Madrid sanadkii 2011-kii waxa uu naadiga ku sameeyay dib u habeyn aad u ballaaran, isagoo ka dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican Qaaradda Yurub.
Tan iyo markii uu Atletico ku soo biiray waxa uu Simeone qarash-gareeyey 365 Milyan oo dollar oo u dhiganta 325 milyan oo Euro, isagoo laba jeerna u soo saaray ciyaarta kama dambeysta ah ee Champions League, halka kooxdan Spanish-ka ah ay faa’iido fara badan ka heshay heshiisyada dhanka ganacsiga ah ee ay la gasho shirkadaha xayaysiinta loo sameeyo iyo xuquuqda Telefishinnada tebiya ciyaarahooda.
Waxaa kale oo intaa dheer in Simeone markalena Atletico keenay nus dhammaadka Champions League, halka 2 jeerna uu la qaaday koobka UEFA.
Haddaba su’aashu waxay tahay ma sii socon doonaa mashruuca Diego SImeone ee Atletico?.
Waqti xaadirkan Atletico waxa ay xaqiijisay ka qayb galka tartanka Horyaallada Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka soo socda, maadaama ay ku jirta kaalinta 2-aad ee kala sarreynta xagga dhibcaha ee kooxaha La Liga iyadoo leh 68 dhibcood, halka Barcelona oo hoggaaminaysana ay leedahay 77 dhibcood, Real Madrid oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxay leedahay 64 dhibcood, Getafe iyo Valencia oo 4 iyo 5 ku kala jirana waxay leeyihiin 54 iyo 52-dhibcood.
Kylian Mbappe oo ku rajo weyn inuu Kabta Dahabka ah ee Yurub ka qaado Lionel Messi
Real Madrid oo aad u doonaysa saxiixa Paul Pogba, balse u baahan inay arrinta saddex dhinac ka eegto!